Isbitaalka Qalliinka ee Berbera – Taxanaha 89 – 90 – Qaybta Lixaad: Qalinkii Yuusuf Garaad | Haldoor News
Isbitaalka Qalliinka ee Berbera – Taxanaha 89 – 90 – Qaybta Lixaad: Qalinkii Yuusuf Garaad
March 22, 2018 - Written by admin
Isbitaal cusub oo qaliinka oo ICRC ay ka hirgelisay Berbera ayaa bartamihii Agoosto 1989 billaabay in uu dhaawac qaabbilo.
Waa sawir aan tusaale u soo qaatay
Waxaan xusuustaa General markaas ahaa Taliyaha Qaybta 21aad ee Hargeysa oo noogu yimid miiska aan ka cunteyno. Waxaa loo diiday in uu bastooladdiisa la soo galo. Suunka baylka ah ee galka bastooladdu u suran yahay ayuu iska furay oo u dhiibay askari ilaaladiisa ah. Ka dibna isaga oo sacabbooleey ah ayuu keligiis miiska noogu yimid.